लिदी पहिरो विस्थापितलाई राहत हस्तान्तरण – Sulsule
लिदी पहिरो विस्थापितलाई राहत हस्तान्तरण
सुलसुले २०७७ भदौ २१ गते १५:१९ मा प्रकाशित
सिन्धुपाल्चोक, भदौ २१
वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले लिदी पहिरो विस्थापितलाई राहत हस्तान्तरण गरेका छन् । होप एयरलाइन्स र होपमिन फेमिलीलगायत समाजसेवी वाङचुक राप्तेन लामाले उक्त राहत सामग्री सहयोग गरेको हो ।
पहिरोपीडितका लागि पर्साको ठोरी–४ मा गठन भएको राहत सङ्कलन समितिले रु छ लाखभन्दा बढी सङ्कलन गरी सहयोग गरेको छ । शनिबार बिहान पर्साको ठोरीबाट आएको एक टोलीले अस्थायी आवास क्षेत्र जुगल –१ स्थित बाँसखर्क पुगेर रु. छ लाख ४३ हजार नगद सहयोग गरेको नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला समन्वय समिति पर्साका अध्यक्ष निमा लामा पाख्रिनले राससलाई जानकारी दिए ।
यही भदौ २ गते वडा नं. ४ को घ्याङडाडामा वडाध्यक्ष बईबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा बसेको सामाजिक अगुवाहरुको भेलाले पहिरोमा परी घाइते भएका, आफन्त बेपत्ता भएर र मृत्यु भएर शोकमा रहेकालाई राहत वितरण गर्ने उद्देश्यले शिक्षक दलबहादुर स्याङबोको संयोजकत्वमा राहत सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अभियन्ताको रूपमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले समन्वय गरेर देश तथा परदेशबाट सहयोग रकम जुटाएको समिति संयोजक शिक्षक स्याङ्बोले जानकारी दिए ।
पहिरोले पूर्णरूपमा घर क्षति भएका र आफन्तसमेत पहिरोमा गुमाएका १० घरधुरीलाई जनही रु. ३० हजार, घरमात्र क्षति भएर विस्थापन भएका १८ घरधुरीलाई जनही रु. १८ हजार ५०० का दरले र एक जना घाइतेलाई रु. १० हजार राहत रकम प्रदान गरिएको छ ।
समितिमार्फत सङ्कलित रकम शनिबार प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराइएको अध्यक्ष पाख्रिनले बताए । साउनको ३० गते लिदीमा गएको पहिरोमा परेर ३७ ले ज्यान गुमाएका थिए भने ३७ घर पुरिएका थिए । अझै दुई जना बेपत्ता छन् ।
पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाका पहिरोपीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ । तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङ्टन परिवार अमेरिकाले रु. एक लाख ६० हजार वितरण गरिएको अभियन्ता कृष्ण तामाङले जानकारी दिए ।
तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङ्टन परिवार अमेरिकाका सचिव हेमकला तामाङ अभियन्ता रत्न तामाङ र सुनिता तामाङले सङ्कलन गरी पठाएको रकम कृष्ण तामाङको तेतृत्वमा कलाकार बैरागी तामाङ, केशरी तामाङलगायतको समूहले पीडितलाई बुझाएको तामाङले बताए् ।
पहिरोकै कारण मृत्यु भएका परिवारलाई रु. १० हजार र घर ढलेका परिवारलाई रु. पाँच हजारका दरले सहयोग गरेको तामाङले जानकारी दिए । गाउँपालिकाका बरुवाका ११ तथा तिपेनिका २० घर गरी ३१ घरपरिवारलाई रकम बुझाइएको हो ।